Ndifuna ukwazi indlu kubekho inkqubela, kodwa andiqondi njani ukwenza oko
Molo. Oku kancinci’ ixesha ukuba wam town mna uqaphele a kubekho inkqubela ukuba ndithanda kakhulu, kodwa apho mna andazi njani ukuba ucele ukuba uye ngaphandle, hayi ke kakhulu ngenxa shyness kodwa ngenxa nokungabikho ezithile njengoko kusoloko kwi company umntu kwaye mna andinaku k ubonakala ngathi ukufumana ilungelo mzuzu ukuya kuxelela yakhe ukuze ndibe nento yokuba ngathi ukufumana ukwazi yakhe. Ndiphila kwi town nge ngenye indlela enkulu, ke ngoko kufuneka andazi njani ndim mna awuwazi njani yayibizwa ngokuba yakhe de iiyure ezimbalwa eyadlulayo ngale ntsasa kodwa mna zilawulwe ukufumana phandle yokugqibela igama (kodwa hayi igama) kwaye ndizama ukucinga yokubhala kwabo leta, kuba kancinci romanticcomment apho ndiya kuvuma ukuba xa ndibona ke ndifuna ukuva into ethile ngaphakathi kwam, into endiya hadn ukuba waziva kuba kakhulu ixesha elide. Yintoni ingaba uthini. Kusenokuba ngumsebenzi viable isisombululo, okanye kwazi ngesondo predator. Ucinga ukuba kungcono ukushiya kwabo njengokuba uqhagamshelane, ukuba ibingu anomdla ngokwenene ukufumana ukwazi kwam, iselula inani okanye i-imeyili. Mna ekhangele phambili izimvo, ingakumbi ukususela girls.
Abafazi na umntu ngubani owaziyo njani stupirle ebone kobuso benu indlela kanjalo rimettercela. Ukususela oko ubhala kuwe yakho andazi, kwaye kwangoko a letter, umgwebo wam, izakuba absolutely ezingafanelekanga. Kufuneka ukufumana indlela kuba eyodwa okanye phezu phezulu. Kwaye oku kunokwenziwa ngokuthi amaqondo, ngokusebenzisa inkqubo ukuba develops ngemini umhla kwaye ukuba izoba ingqalelo yakho kwi kunokwenzeka admirer, okanye, kungenjalo, into abasebenzi abaqhankqalazayo ukuba ufuna ukubeka phantsi ukukhanya kwayo reflectors, ezifana indlela ukuba yena izaziso kuwe. Akukho recipe ukuba uyaya kakuhle kwaye wonk ubani ukufumana eyiyeyakhe, exploiting zabo personal iimpawu. Abo kuchaziwe, ndiya kuba soloko opted kuba indawo kwi ngokwam, eshiya oko kuye ukukhetha ukuba yintoni wabona basenokuba inzala kuwe, kwaye mna isiqinisekiso kufuneka ukuba ethandwa kakhulu ubulumko kanjalo olubuyiselweyo bethu imihla, omdala esithi,”fortune rewards i-engqindilili”kum sele rhoqo sele ilungile. Abanye abafazi njenge cwaka abantu, abo akunjalo, le caterpillar, oko akunjalo t kukhubeka kuzo phakathi kweenyawo zenu kunye funny jokes kwaye ama, kodwa ungajonga yakho eyona ukukhanya, ngemini yobumnyama kwaye disheveled, abo sazi njani ukuba mamela kuwe ngaphandle zinika kuwe njengezingacelwanga ingcebiso, ukuba akhona kodwa hayi intrusive, hayi necessarily osibekeleyo kwaye romanticcomment, kodwa subtle kwaye banobuhlobo. Ukwazi umfazi akuthethi ekubeni ukuba langoku okanye angenise kwabo, get ukwazi umfazi yindlela entsha ukungena a mfihlelo ka-intlonipho. I-ingqalelo, izipho, amazwi romanticcomment, zonke masi wachitha ukuba athimba a intliziyo ukuba kuphela ixesha unako kuphunyezwe. Bonke trappings mathiriyali kuhlala i drawer ukukhula ulwakhiwo, amazwi kunye REAL umdla ungalibali. Abantu uthi, ngenxa yokuba ingaba beautiful, kwaye abafazi igcobe kwaye adorn zabo outer ubuhle. Umntu abo amagqabi i-marko ayisayi anyhwalaze, kodwa listens kuwe, akunike zona izinto, kodwa kwenu izandla kwi-isipho somoya amehlo akhe enyanisekileyo, lakhe nkxalabo, lakhe ukuqonda unconditional. Ndaya phezu, mhlawumbi, umntu, ulinde efanelekile ziqwalaselwe. Kwaye xa uziva ukuba lonke ihlabathi ngu distant, nguye. Kukho amazwi ukuba akaphumeleli ukuphakamisa ukusuka emhlabeni kwaye abanye ukuba, endaweni yoko, iphawulwe boku, i wesalathisi ukufunda emoyeni ukuya kwi-caress amafu. Kwaye ukuba ufuna vala amehlo enu uyakwazi ndikwazi ukuphefumla kakuhle kwi-music ukuba vibrates ngaphakathi entliziyweni yakhe. Ubhala ileta, ukuba akunjalo transposing kuthetha ukuba ungakwazi zange ukuma ngaphandle. Kwaye emva kokuba loo leta awuyi kuyifumana impendulo, ukusoloko ukhumbula ukuba ngaba ukuqeshwa baba, yena akazange. uyazi, andiqondi ukuba ukuba ubhale ufumana ilungelo nto. ngokunxulumene nam kufuneka siqale inqwelo moya, greet yakhe, sorridendole, ekwenzeni kubo wink’orba ngoko uza kubona ukuba uza yakhe evela kuwe. ukuba akunjalo, ngobukho ezi attentions thatha nzulu impefumlo kwaye zichaziwe. nathi girls na okkt ukuba kukho uthi: molo igama lam ngu Pinco pallino ufuna beka phantsi ngaphandle kwaye get ukwazi kwethu. hayi, okkt ukuba kukho ndizixelela ukuba: mhlekazi Genevieve, ndifuna ukuthi ukuba uphelelwe nje beautiful kwaye ndithanda wena ke kakhulu. impendulo izakuba: heck, ndiyazi ukuba ndiza beautiful nisolko hayi kuqala ukuba undixelele ukuba ngubani lowo likes malunga nam. benza i-babenenkalipho zichaziwe. ndikunqwenelela ithamsanqa kwixesha i-lokuba unofficial oyingcwele imihla. Mhlekazi koti idla into yokuqala mna ingaba ngu angenise ngokwam ngqo kwaye ucele ukuba uye ngaphandle izakuba, kokukhona ilula, kodwa mna qinisekisa ukuba ufumana absolutely i-ihlale ngexesha elingelilo lokuhlala meko kukuba kunzima indlela ingaba kubekho inkqubela, babambisa yakhe a mzuzu yedwa okanye nge umhlobo, mna kufuneka pedinarla imini yonke kunye umngcipheko ukuba awunakuba nako ukufumana loo mzuzu (ucinga ndabona, yedwa, kuba imizuzu kwi-iminyaka ukuba ndibona ngoko ke ufuna.). mhlawumbi hayi uthando ileta, kodwa andiqondi ukuba ukuba yena ungathanda ukuba xa ndimbuza ukufumana phandle kwi-phambili abahlobo ukuba ngokuqinisekileyo ndiza kuthi hayi, kuba uloyiko ujonge ngathi i-lula kubekho inkqubela, kwaye inani elingama-poop izakuba hayi kuphela kuba nam kodwa kanjalo kuba yakhe) bunzima ukuba waba lamp, ngoku, ingoma yi-adolescents. xa sihamba ngalo idinga lakho, wena sele uyazi ukuba yena uza okanye hayi.
umahluko lies apha
gcinani amehlo enu vula, kwaye baya blindfold ngoko ke ukuba umntu uza kuba kaloku ngalo idinga uza kwazi ukuba kutheni kukho weza. Mbhodamo ewe, disappointment ka-okulindelweyo yinxalenye wam baggage, elidlulileyo, hayi kakhulu kude. Ndinguye ezithile, nangona kunjalo, ukuba nokuchithakalela ixesha lokulinda kuba into yokuba siyazi akuyi kwenzeka. Kwi ephikisana, ayinjalo a ilahleko kwexesha, ukuyisebenzisa ukuqonda ukuba ngubani thina ubuso ngaphandle tapparci amehlo ethu ukuba inyaniso ukuba, ukuba uya kwenza iinzame ezininzi, kufuneka cacisa ukususela ekuqalekeni. Uyayazi ixesha xa esithi abo imiba hayi unobuhle idinga lakho, musa dubiterai, nkqu kuba okhawulezayo le. Ukuba uya kwenza iinzame kunye ngokwakho, izichazi ingaba cacisa, musa ukuthetha ngayo kum izithembiso hayi agcina, ndiyanithandaza, abo bamele inxalenye oluntu indalo, cinga indlela abaninzi abancinane amazwi yangaphakathi baya kukuxelela ukuba zezenu yi wenu ithemba. Ndiqinisekile uziva kanjalo wena ubufuna cwaka kwabo. Ukuba andenzi impendulo na ngaphezulu kuba nokungabikho kuza, kodwa ngenxa yokuba ndiya kuba limited ixesha lately. Ke ngoko, mna apologize ukuba ndishiya oku ngeposi ngaphandle siphendule a kunokwenzeka luphefumle elizayo. ewe, mhlawumbi i-isizathu, kodwa amava, ndinixelela ukuba unye le leta, mna sfagiola kakhulu, kodwa ke njengoko ubuya. uyazi kuphela yokugqibela igama okanye yaye uthi igama komnye umntu. kwaye indlela endala ufuna. ngokunxulumene nam, nangona kunjalo, nibe vala phambi ukuba yena yalo inkampani ukuba akunjalo bamisela yi-sun, bitches. ngoko ngokuqinisekileyo wouldn ukuba benyuke ngaphandle zinika kwi-iliso, kwaye ngoko uza uzakuyiqonda into yena ke ukucinga kuni. P. S uxolo ukuba ndithi i-ukwenzeka kodwa ndizakuyenza zama
← Iyaphephezela zephondo ngaphandle ubhaliso: nantsi eyona - Chimerar evo
Free Online Dating Zephondo Ngaphandle Yobhaliso →
© 2019 Ividiyo incoko ye-Italy